Min Aung Hlaing and his regime forces have excessively used artillery units and are reported to have usedadrone to drop bombs which have burned 94 buildings—including the Holiness Church and staff quarters—to the ground in the western town of Thantlang, Chin State from January 30 through February 1, 2022. Since September 9, 2021,…
Min Aung Hlaing and his regime forces have launched their horrific violence, arson, and artillery shelling, which has scorched more than 800 buildings in the town of Thantlang, Chin State, Burma since September 9, 2021. January 5, 2022, marks the 18th time that the town of Thantlang has been set on fire by the regime….
The Peace and Justice Committee condemns Gen. Min Aung Hlaing and the junta’s regime for their barbaric acts of opening fire on and running over peaceful protesters in Yangon, killing at least four people on December 5, 2021. We condemn Gen. Min Aung Hlaing and the junta’s regime for their inhuman act of burning 11…
၁။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အာဏာရှင်စစ်တပ်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်သူများကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်၊ ကားနှင့်တိုက် ဖြိုခွင်းသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ လေးဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်းမိုက်မဲရိုင်းစိုင်းသည့် လုပ်ရပ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတရေး ကော်မတီက ရှုတ်ချပါသည်။ ၂။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အာဏာရှင်စစ်တပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒွန်တော်ကျေးရွာတွင် အရပ်သား ၁၁ ဦးကို လူမဆန်စွာ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတရေး ကော်မတီက ရှုတ်ချပါသည်။ ၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများနှင့် အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်နေသည့် စစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို…
Proposed Amendment to The BURMA Act of 2021
Proposed Amendment to The BURMA Act of 2021 By Peace and Justice Committee and Kachin Alliance of USA The Peace and Justice Committee of the Chin Baptist Churches USA in partnership with the Kachin Alliance of USA welcomes the “Burma Unified through Rigorous Military Accountability Act of 2021”, or the “BURMA Act of 2021” introduced…
Min Aung Hlaing and his regime forces have launched their horrific violence, arson, and artillery shelling, scorching nearly 300 houses and killing Chin people in the town of Thantlang, Chin State, Burma since September 2020. On December 4, 2021, the junta forces again shelled the Chin State town of Thantlang, destroying 19 houses. Such brutal…